Manni Maree Ministirootaa murteewwan addaddaa dabarse – Fana Broadcasting Corporate
Finfinnee, Onkololeessa 29, 2012 (FBC) – Manni Maree Ministirootaa walga’ii idilee 75ffaa har’a gaggeessen murteewwan addaddaa dabarse.
Wixinee dambii ittiin bulmaata raayyaa ittisa biyyaa kanaan duraa lakkoofsa 385/2008 fooyyessuuf, Ministeerri Raayyaa Ittisaa FDRI qopheessuun mana marichaaf dhiyeesserratti mari’atee, galteewwan muraasa ega ida’een booda hojiirra oolu murteessera.
Dambii hundeessituu Faawundeeshinii Raayyaa Ittisa Biyyaa Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa FDRI qopheessuun dhiyeesserratti mari’atee, galteewwan muraasa ega ida’een booda hojiirra akka oolu murteessera.
Manni Maree Ministirootaa wixinee labsii naamusa sirna bulchiinsa federaalaa Abbaan Alangee Waliigalaa Federaalaa qopheesserratti mari’atee galteewwan dabalataa ida’uun akka ragga’uuf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatif ergeera.
Tamsa’a haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa ittisuu fi to’achuuf wixinee labsii Abbaan Alangee Waliigalaa Federaalaa qopheesserrattis mari’atee galteewwan sirreeffamaa ida’uudhan akka ragga’uuf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatif ergeera.
Dabalataan wixinee labsii mootummaan FDRI fi Riippabliikni Jibuutii sarara ujummoo gaazii uumamaa dabarsuuf waliigalanirratti mari’atee akka ragga’uuf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatif dabarseera.
Dameen ispoortii sadarkaa idila addunyaatti morkaataa akka ta’uuf xiyyeeffannoon…
Injiinar Taakkalaan Mana Barumsaa sadarkaa 1ffaa Burqaa Waayyuu daawwatan
Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa fi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii…
Haleellaa Keemikaalaa Oolmaa Daa’immaanii Chaayinaatti…